London | OromianEconomist
#OromoProtests 2020 Global Solidarity Rally in London #HacaaluuHundeessaa July 3, 2020
Tags: #OromoProtests, Hacaaluu Hundeessaa, London
Join #OromoProtests Oromo resources
The Following is Peaceful Solidarity Rally in London videos
#OromoProtests global solidarity rally, London 3 July 2020
Protest against Ethiopian government takes over Downtown intersection, OHIO
Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo April 30, 2017
Tags: #OromoProtests, Africa, Fayyis Leellisaa, Feyisa Lilesa, London, London Marathon, London Marathon 2017, Old Town Hall, Oromo, Oromo community in UK, Oromo community in UK Honored Olympian Feyisa Lilesa, Oromo people, Stratford
Dorgommiin Marathon Raawwate ilaalchisee
Dorgommiin London Marathon jedhamuun beekamu magaalaa London Keessatti geggeeffame. Dorgommii Ebla 23, 2017 geggeeffame kana irratti akkuma hubatamu atileetota beekamoo Marathon dabalatee namoota hedduutu qooda fudhate. London Marathon irratti dorgomtoonni Oromo qaamota adda addaa bakka bu’uun qooda fudhatan.
Dorgommiin Marathon ummata Oromoo biratti haarawaa miti. Oromootni hedduun kana akka Abbabaa Biqiilaa, Maammoo Waldee fi kkf fiigicha Marathon mohachuun Itoophiyaan akka beekamtu yommuu godhan mirga Oromoof jecha kallattiin qooda isaan qabaachaa turan garuu waan ifatti mul’ate hin turre. Kunis haala yeroo sanaa fi dammaqiinsa tureen ka masakamu yommuu ta’u Fayyisaa Lalisaa ka adda godhu garuu Marathonii fi qabsoo ummatni Oromoo mirga isaatiif godhaa jiru walitti fiduun addunyaan akka beektu gochuu danda’uu isaati. Ummata Oromoo mirgi isaa sarbamaa jiruuf sagalee ta’uun addunyaa hubachisee.
Gootichi Oromoo Fayyisaa Lalisaa bakka bu’aa biyya kamuu otoo hinta’in Oromoo fi Oromummaa qofa bakka bu’uun nama qooda fudhate yommuu ta’u Oromootni hawaasota Oromoo bakka garaagaraa London keessatti daandii adda addaa qarqara gurmuun dhaabbachuun ‘’Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo’’ jechuun sagalee olkaasuun jajjabeessaa turan.
Fayyisaan yeroo dhihoo kana Ameerikaa keessatti yeroo lama dorgommii Marathon geggeeffamee ture irratti fiiguun yommuu 1ffaa fi 2ffaa bahu miidhama luka isaa irra gahe irraa otoo hindandamatin akkasumas boqonnaa gahaa ta’e otoo hin argatin dorgommii isa kana irratti nama qooda fudhate dha.
Fayyisaan gooticha keenya, kutataa fi hadha qabeessi Oromoo, ka madaalamu London Marathon mohachuun ykn mohatamuun akkasumas Rio-Olympics 2016 irrattis mohachuu isaa qofaan otoo hintaane, fiigicha yommuu xumuru harka isaa lamaan olkaasee wal qaxxaamursuun mallattoo ummatni Oromoo karaa nagaan mirga bilisummaa isaaf qabsoo ittiin geggeeffataa jiru addunyaatti waan agarisiisuu danda’eef dha.
Bifa kanaan Fayyisaan kanneen rakkoo Oromoo beekuun hafee, Oromoon ummata akkamii akka ta’ee fi essatti akka argamu illee dhagahee ka hinbeekne akka beeku nama godhe dha.
Fayyisaan nama of danda’ee jireenya gaarii jiraataa ture yommuu ta’u mana gaariin, konkolaataa gaariin walumaagala bu’aan ykn dantaan otoo isa hindagachiisin nama rakkoo ummata isaa hubatuun addunyaa illee hubachiisuu danda’e akkasumas dantaa offif jecha rakkoo ummata offii namoota dagataniif illee nama fakkeenya gaarii ta’uu danda’u dha.
Atileeti Fayyisaa Leellisaa akkuma yeroo biraa dorgommii London Marathon yommuu xumuree fi BBC waliin yommuu gaaffii fi deebii geggeessee ture harka isaa lamaan olkaasee wal qaxxaamursuun mallattoo ummatni isaa karaa nagaan qabsoo isaa geggeeffataa jiru irra deebiin agarsiise.
Fayyisaan seenaa Oromoon mirga isaaf falmataa jiru keessatti qooda olaanaa yommuu qabaatu ummatni Oromoo Diasporaa goota kana cina dhaabbachuu fi jajjabeessuun akka irraa egamu dirqama lammummaa ofirraa qaba.
Oromootni UK waamicha lammummaa koreen hojii geggeessituu hawaasa Oromoo UK dabarsee ture kabajuun bakka barbaachisaa ta’etti argamtanii goota Oromoo Fayyisaa Leellisaa jajjabeessuu fi hamilee kennuufii keessaniif hedduu galatoomaa. Lammiiwwan keenya, Oromoota UK yoomiyyuu taanaan isin gaachana hawaasa Oromoo UK waan taataniif isiniin boonna. Irra deebiin hedduu galatoomaa jenna.
Itti dabalata barreeffama kanaa kan ta’u as tuqaa dubbisaa: